Fizaka-manana ara-tsaina : tokony hiaro ny zava-bitany ny tompon’ny famoronana | NewsMada
Fizaka-manana ara-tsaina : tokony hiaro ny zava-bitany ny tompon’ny famoronana
Nanaovana fivoriana, omaly tao amin’ny Colbert, momba ny fizaka-manana ara-tsaina hisian’ny fanavaozana ho fampandrosoana ny toekarena, fampiroboroboana ny sosialy sy fiarovana ny kolontsaina eto Madagasikara.
Nofaritana ny politika eto amin’ny firenena miainga avy amin’ny Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) miaraka amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny indostria, misy ny Office national de la propriété intellectuelle (Omapi). Efa nisy ny fivoriana ny taona 2012 namaritana izany politika izany ho fantatry ny tompon’andraikitra samihafa, izay efa nankatoavin’ny filankevitry ny governemanta ny fampiharana azy tamin’ny fiandohan’ity taona ity. Ho fanamafisana izany politika izany, nisian’ny fifanakalozan-kevitra avy amina traikefa samihafa eo amin’ny mpamorona malagasy sy ireo manam-pahaizana avy any ivelany.
Tsy maintsy misy aloha ny mpamorona hisian’ny fanavaozana, raha faritana tsotra ny hoe fizaka-manana ara-tsaina (propriété intellectuelle). « Izay famoronana mitondra fanavaozana izay no tokony harovan’ny tompon’ny famoronana mba tsy hangalarin’ny hafa », hoy ny tale jeneralin’ny Omapi, Ravoaharison Christian Claude. Mitondra izany ny tompony sy mampahafantatra ny zava-bitany any amin’ny Omapi.
Fisolokiana ny “vita malagasy”
Tsy anjaran’ny Omapi ny manenjika izay tsy ara-dalàna fa manampy kosa any amin’ny fitsarana raha misy fitoriana ataon’ny tompon’ny famoronana. Malaza eto amintsika ny fisolokiana marika amin’ny entam-barotra, ny “vita malagasy”. Anjaran’ny minisiteran’ny Varotra ny manenjika ireo tsy ara-dalàna sy mampihatra ny sazy.
Ilaina hatrany ny famoronana hisian’ny vokatra vaovao, raha eo amin’ny lafiny toekarena. Toy izany koa any amin’ny sehatra hafa, ohatra, ny kolontsaina, famoronan-kira, sarimihetsika, sns. Izay mahavita vaovao amin’ireo, tokony hiaro ny zava-bitany hatrany. “Na ao anatin’izao fanatontoloana izao aza, misy lalàna miaro ny zon’ny mpamorona ary rehefa tsara fiarovana izay vao trandrahina”, hoy ihany ny tale jeneralin’ny Omapi.